Kukwezva Kune Ngozi Kudzivirira iyo Webhusaiti Webhu | Martech Zone
Ini ndanga ndichifunga nezve kutumidza ichi positi, Nei Jonathan Salem Baskin Akashata… Asi ini ndinobvumirana naye pazvinhu zvakawanda muchikamu chake, Kukwezva Kune Njodzi kweSocial Web. Ini ndinobvuma, semuenzaniso, kuti vezvenhau gurus vanowanzoedza kusundira mabhizinesi mukushandisa vezvenhau vasinganyatsonzwisisa tsika kana zviwanikwa kukambani yavari kushanda nayo. Hazvifanirwe kunge zvichishamisa, zvakadaro. Vari kuedza kutengesa chigadzirwa ... kwavo pachavo kubvunza!
Ini handibvumirani nazvo Mr. Baskin pane mashoma mapoinzi, hazvo:
Mashoko acho kukwezva kune njodzi inomutsa mumwe mufananidzo unotyisa wewebhusaiti yekuparadza kambani. Icho chokwadi ndechekuti, kunze kwekunge iwe uchishandira iyo kambani pasi peakakomba marongero ezvinhu, kutaura uye kuteerera kune ako vatengi hakusi kunotyisa sezvazvinonzwika. Muchokwadi, zvinotarisirwa kwazvo uye zvinokosheswa. Kana makwikwi ako aripo muma network ausipo mu… zvawanikwa anogona kuparadza. Makambani ane zviwanikwa uye maitiro munzvimbo yekugadzirisa mukurumbira wavo online uye kubata kutaurirana awana yewebhu webhusaiti inoshanda uye inoshanda kune zvese kubva kumatambudziko evashandi vevatengi kusvika kuvaka chiremera muindastiri yavo.
The social webhu yakachinja zvese… Kupfuura vatengesi vangade kubvuma. Kutaura kuti haina kunge kungave kwakaenzana nekutaura kuti masangano haana kuita shanduko mukuvandudza kwemaindasitiri. Mushure mezvose, mitsara yekugadzira, zvigadzirwa, manejimendi uye nebasa zvese zvaive zvichiripo, handiti? Right… asi masangano akapa masimba kuvashandi mukukanganisa manejimendi uye kubhadhara. Vashandi vevashandi vanogona kugadzira kana kutyora kambani… uye vanayo. Izvi ndizvo zvakaenzana newebhusaiti yemagariro. Makambani atove kusvetuka kukwikwidza kwavo nekutora maitiro ehukama; vamwe vari kudonha shure. Kutaura zvimwe hazviite.
Mr. Baskin inoti:
Vanhu vagara vaine hurukuro nezve mabrand. Pamberi peinternet, paive nenharaunda dzejogirafi, basa, dzidzo, chinamato uye mapoka emapoka enharaunda angave aive akapfupika uye akajeka kupfuura iwo anowanikwa online, asi pachinzvimbo chakadzika uye chinotsigira. Zviito zvavo zvainyatso kuita maoko-pamusoro uye mhedzisiro yavo yakawedzera mararamiro-kutsanangura. Hunhu hwemagariro hauna kusarudzika kune tekinoroji; ingori kuti isu tinoonekwa zvisina kukwana mune zvimwe zvinhu zvekuti vanhu vanotaurirana sei izvozvi, saka tinoda kukurudzira kana kutora chikamu mune izvo zviitiko.
Hongu, ichi ichokwadi ... asi pane nyaya ndechekuti idzi hurukuro dzave kuita chikamu che rekodhi yeruzhinji. Zvinogona kuverengerwa, zvakarongeka uye zvakawanikwa muinjini yekutsvaga mune imwe nyaya yemasekondi. Uye ruzhinji rwuri kubhadhara zvakanyanya kutarisa kune zvisina kunaka zvirevo uye kuongororwa kunounganidzwa nekambani. Mutsetse wakarasika pakubata nyaya yevatengi mazuva ano unogona kuita chakakomba mukurumbira wekambani kwausina kumboita kare.
Vatengesi havabvumirwi kuvanda kuseri kwechiratidzo, sirogani, uye jingle inoshamisira ... vashambadzi vari kumanikidzwa kutaurirana zvakananga nevanhu. Taingotaura chete… izvozvi tinofanira kuteerera uye kupindura. Hapana mhinduro munzvimbo ino yemagariro yakafanana nekusava nehanya nevatengi vako. Vashambadziri havana kunge vakagadzirirwa zvakanaka izvi… uye vari kutsvanzvadzira kuti vadzidze kupokana kwekushora, kuita netiweki, uye nehumwe hunyanzvi zvinopfuura kwavo kudzidza uye ruzivo.
Iko kukanganisa pamabhizinesi chaiko. Makambani ari kubatikana kutsvaga zviwanikwa zvekufukidza iko kuedza kunodiwa kuongorora nekupindura kune webhusaiti. Iyi ndiyo imwe nyaya yakarasika nayo pasocial media gurus. Ivo vanorerutsa zviwanikwa zvinodiwa kushambadza zvakakwana, kupindura nekukasira zvakakwana, uye kuvandudza maitiro anodikanwa kuti vawedzere zvizere webhusaiti yewebhu.
Saka, ini ndichibvuma iyo gurus ita basa rakashata nevatungamiriri pakuvagadzirira iwo webhusaiti, ndinotenda kudzivirirwa kwewebhu padandemutande kune njodzi huru.
Tags: jonathan salem baskinpasocial media bhizinesipasocial media manyepopasocial webhu
Facebook Diki Bhizinesi Ongororo Mhedzisiro
Matipi mashanu Ekukura Bhizinesi Rako neMobile